UNICEF Somalia - Media centre - Midowga Yurub iyo UNICEF oo wadajir ula dagaallamaya daacuunka ka jira Soomaaliya
Brussels/Muqdisho, 28 Juunyo 2017 – Dadaal bani’aadamnimo oo degdeg ah oo ay wadaan Midowga Yurub iyo UNICEF ayaa taageeri doona 602,000 qof oo ku nool Soomaaliya, oo ay ka mid yihiin ilaa 301,000 carruur ah iyo 156,500 haween ah, oo ku dhaqan gobollada sida ugu ba’an uu u saameeyey shuban-biyoodka ba’an/daacuunka dillaacay oo lala xiriirinayo abaarta dabadheeraatey. In ka badan 53,000 xaaladood oo shuban-biyood ba’an/daacuun ah iyo ku dhowaad 800 qof oo u dhimatey ayaa la soo sheegey tan iyo bilowgii sanadka, dadkaas oo qaar badan ay yihin carruur da’ yar.
Lacagta €4.5 milyan ee Euro ah ee ka timid Midowga Yurub waxaa lagu bixin doonaa waxqabadyo naf-badbaadin ah oo lagu xakameynayo isugudbinta daacuunka oo korna loogu qaadayo gargaarka degdegga ah ee ay helaan dadka dhowaan ay soo barokiciyeen abaarta iyo colaadda. Waxqabadyadan waxaa ka mid ahaan doona daaweynta ilaha biyaha iyo sidoo kale daawooyin looga hortegayo faafidda cudurka. Wada-hawlgalkan ayaa sidoo kale taageeri doona dabagalka meelaha ay dhibaatadu saameysey oo ay ka mid yihiin iskuullada iyo degsiimooyinka barokacayaasha. Bulshooyinka ayaa si dhow looga qaybgelind doonaa waxqabadka.
“Haddii aan tallaabo degdeg ah la qaadin, nafta boqolaal kun oo carruur ah oo Soomaaliya ku nool ayaa halis weyn ugu jira shuban-biyood ba’an iyo daacuun,” ayaa uu yiri Cumar Cabdi oo ah Ku-xigeenka Agaasimaha Fulinta ee UNICEF. “Waana taas sababta uu aad muhiim u yahay iskaashigan innagala dhexeeya Midowga Yurub. Iskaashigan waxaa uu hubinayaa in aan si joogto ah u bixinno taageero nafo lagu badbaadiyo oo la siiyo carruurta iyo qoysaska baahida ugu weyn u qaba, taas oo nolol iyo geeri uga dhigan kumanaan qof.”
Maaliyadda ayaa sidoo kale awood inoo siineysa in la abuuro kooxo tababaran oo degdeg u gurmada si ay u fuliyaan barnaamijyada, u sameeyaan biyo-dhaamin degdeg ah ayna u daaweeyaan ilaha biyaha. Bulshooyinka degaanka ayaa ka-shaqeyn doona dhiirrigelinta hab-dhaqanno wanaagsan oo fayadhowr iyo nadaafadeed oo ka dhaca iskuullada.
“Midowga Yurub waxaa ka go’an in uu taageero dadka Soomaaliyeed ee u baahan gargaarka. Maaddaama daacuun iyo abaar ay halis ku hayaan waxaa nalooga baahan yahay in aan tallaabo qaadno. Taageerada bani’aadamnimo ee aan UNICEF la garab-taagannahay waxaa ay gacan siin doontaa boqollaal kun oo qof waxaana ay bixin doontaa daaweyn naf-badbaadin ah, waxaana ay ka hortegi doontaa faafidda cudurka,” ayaa uu yiri Christos Stylianides oo ah Guddoomiye Midowga Yurub u qaaabilsan Gargaarka Bani’aadamnimada iyo Maareynta Dhibaatooyinka.
>> Read the press release in English
Macluumaad ku saabsan Agaasinka Guud ee Guddiga Reer-Yurub ee Hawlgallada Ilaalinta Dadka iyo Gargaarka Bani’aadamnimada/ European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
Waaxda Guddiga Reer-Yurub ee Gargaarka Bani’aadamnimada iyo Ilaalinta Dadka (ECHO) waxaa ay maaliyad siisaa hawlgallada gargaarka ee dhibbanayaasha aafooyinka dabiiciga ah iyo colaadaha ee degaannada ka baxsan Midowga Yurub. Gargaarka ayaa loo bixiyaa si eex la’aan ah, toos u gaadha dhibbanayaasha, iyada oo aan loo eegin sinji, koox qowmiyad gaar ah, diin, jinsi, da’, muwaadinnimo ama fikir siyaasadeed. Guddiga Reer Yurub waxaa uu ka mid yahay deeq-bixiyeyaasha bani’aadamnimada ee deeqda ugu ballaaran ay UNICEF ka hesho.
Ku saabsan UNICEF:
UNICEF waxaa ay dhiirrigelisaa xuquuqaha iyo wanaagga ilmo kasta, wax kasta oo aan sameyneyno. Annaga oo kaashaneyna la-hawlgalayaasheenna, ayaan waxaa ka shaqeynaa 190 dal iyo dhul si aan ballanqaadkeenna uga rogno tallaabo-qaad dhab ah, annaga oo diiradda saareyna dadaal gaar ah oo lagu gaarayo carruurta ugu nugul ee aan helin adeegga ay u baahan yihiin, si ay arrintaasi faa’iido ugu yeelato dhammaan carruurta, meel kasta oo ay joogaanba. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan UNICEF iyo hawsha ay u hayso carruurta ka eeg www.unicef.org
Mobile: +254 722 719867, email: sprice@unicef.org